PressReader - Isolezwe: 2018-09-14 - Kuyini ukuthi amadoda avele ngemihlubulo koshisanyama?
Kuyini ukuthi amadoda avele ngemihlubulo koshisanyama?
MASOLEZWE ngibona kufanele ukuthi u-Ayanda Msweli ahlonishwe ngeziqu zobudokotela bezemigwaqo ngoba usebonakalisile ukuthi ubizelwe kule nto. Ngikusho lokhu ngiqonda kahle ukuthi uMsweli uphansi phezulu uthuthukisa iziqu zakhe ukuze agcine esengudokotela wesimo sezemigwaqo.
Bakwethu sonke siyazi ukuthi imfundo lena inzima ayinamngani noMsweli njengoba efunda nje kungamthatha isikhathi eside kabi ukuthi aze afinyelele ebudokoteleni.
Kungenxa yalesi sizathu okaVolos ephakamisa ukuthi amanyuvesi awamnikeze iziqu zokumhlonipha zobudokotela. Ngokumnikeza iziqu zobudokotela sizobe singasho ukuthi akangaqhubeki nezifundo zakhe ezimholela ekutheni abe ngudokotela. Okuyikhona okwenza ngiphushe ukuthi uNongalo enziwe udokotela manje wukuthi angifuni ukuthi sizithole sisesimweni sokuthi aficwe wubudokotela esengumdodovu wekhehla nathi sesaguga.
MaSolezwe akufanele adlelwe umona uMsweli ngokusungula lezi ziqubulo zakhe ezimnandi ezenza kube mnandi ukulalela ukwethulwa kwesimo sesiminyaminya oKhozini FM. Okuyikhona osekuthanda ukungikhathaza wukuthi kunabantu asebesebenzisa lezi ziqubulo zikaMsweli ukuze bafeze izinhloso zabo. Ngokuveza lokhu uVolos akahlosile ukumpimpa abantu kuMsweli kodwa ubona kufanele azile ukuthi kunabantu asebesihlukumeza ngalezi ziqubulo zakhe.
Ngenyanga edlule sithe siziphuzela sishisa nenyama singamadoda, sehlelwa yibhadi lokuthi simenyezwe ngabantu besifazane ebebedlula emgwaqeni bathi: ”Awubheke amadoda avele ngemihlubulo okwebululu koshisanyama kodwa izingane zijanyelwe yiklabishi nophuthu emakhaya”.
Le nkulumo yalaba besifazane yasishiya siphoxekile ngoba sasingakulindele ukuthi singathi sizidlela inyama kuthiwe sifana namabululu avele ngemihlubulo.
Bakwethu, asivumeni ukuthi lezi ziqubulo zikaMsweli sezihambe ibanga elide ngoba nabefundisi sebeshumayela ngazo emasontweni. Ngethuka kabi ngisenkonzweni ngizwa umfundisi eshumayela ethi: “Ukuthi uyivolontiya eliqala amaculo noma ungumkhokheli kodwa kufanele wazi ukuthi ekamelweni kungenwa ngevosho. Uma sewusekamelweni nendoda yakho kufanele uyibingelele ngevosho uphinde uyivalelise ngayo uma isihamba. Kuwubuhlakani ukuthi umthandazo wakusihlwa uwushebe nevosho ukuze indoda ingabhoreki bazalwane.”
MaSolezwe ngiyazi ukuthi abanye benu bazothi uVolos usehubhuza amanga uma ethi kunomngani wakhe owatshelwa yisithandwa sakhe ukuthi inkonzo yasekamelweni idinga ihora lonke kuHeadboard yombhede. Uthi wathi uma ehlaziya le nkulumo wabona ukuthi kusetshenziswa isiqubulo sikaMsweli esithi akuhambeki emgwaqweni umshayeli udinga ihora kuDashboard. Omunye umngani wami wathi: “Hhayi Volos kunzima mfanakithi, sekuyinyanga yesithathu lena induku yaduba itiyela yadla utshani”. Ngavele ngafunda kwezami ukuthi uxamu ushaya izandla, kuthalaza nesomi ekamelweni, induku ayivuki kumngani wami.
Kwenye indawo ngezwa abantu bexabana omunye wathi wesibanibani ongathi sewuvele njengomphetho wepitikoti ezindabeni zami, ngicela ungixege kancane ngoba sizogcina sihagane mawala uma uqhuba kanje. Omunye sathi sihlezi wavele wafonela umngani wakhe wathi uhlezi epulazini likajamu.
Le nkulumo yasishiya sinokucasuka nokudideka ukuthi umuntu engathi ehlezi nathi kodwa athi uhlezi epulazini likajamu. Ngala mazwi amafushane ngicela uMsweli akhuze abantu bangazisebenzisi kabi lezi ziqubulo zakhe ngoba kuyogcina kubekwana izandla uma abantu bezochwensa abanye.